Indlu yaseCastletown - IntoKildare
ICastletown, njengendlu yokuqala futhi enkulu kunazo zonke yesitayela sasePalladian e-Ireland, iyingxenye ebalulekile yefa lokwakha lase-Ireland. Mangaza esakhiweni esihle kakhulu futhi uthathe isikhathi sokuhlola ama-parkland ekhulu le-18.
Yakhiwe phakathi kuka-1722 no-c. 1729 kaWilliam Conolly, uSomlomo we-Irish House of Commons, iCastletown House yakhelwe ukukhombisa amandla omnikazi wayo futhi isebenze njengendawo yokuzijabulisa kwezepolitiki ngezinga elikhulu.
Ukuvakasha okuqondiswayo nokuziqondisayo kwendlu kuyatholakala futhi kunemicimbi eminingi enobungani yomndeni unyaka wonke.
Amapaki aklanywe ngekhulu leshumi nesishiyagalombili aklanyelwe kanye nemifula kuvulwa nsuku zonke unyaka wonke. Ayikho imali yokungena yokuhamba uphinde uhlole ama-parkland. Izinja zamukelekile, kepha kufanele zigcinwe ziholile futhi azivunyelwe echibini, njengoba kunezidleke zezilwane zasendle.
Imfihlo yendawo: I-Biodiversity Garden yaseCastletown House yindawo enhle yokuletha izingane. Ngomkhondo omnandi nofundisayo, indawo yokudlala nokuningi ongakuhlola, kuzothumba izivakashi ezisencane ezingezona kangako!
Amagugu Nomlando, Outdoors, Izindlu & Izingadi, Ukuhamba Izintaba, Imvelo & Izilwane zasendle, Izinto Zamahhala Ongazenza, ICelbridge
ICelbridge, Isifunda iKildare, Ireland.
UMsombuluko - Ilanga: 10 ekuseni kuya ku-5 ntambama
Ngezikhathi zokuvakasha nezindleko zokungeniswa bheka iwebhusayithi. Ukwamukelwa MAHHALA ezindaweni ezibuyisiwe zepaki zekhulu le-18, kuvulwa nsuku zonke unyaka wonke.